Bam gacmeed lagu weerar maqaayad dad shacaba fadhiyeen | KEYDMEDIA ONLINE
Bam gacmeed ayaa lagu weeraray maqaayad ay fadhiyeen dad shacab ah oo ku caweeynayay maqaayadda, waxaan halkaasi ka dhashay dhaawaca qaar kamida dadkii fadhiyay maqaayadda.
KISMAAYO, Soomaaliya - Magaalada Kismaayo ee xarunta Kumeel Gaarka ah ee Dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ka dhacay weerar bam gacmeed kaasoo xalay lagula eegtay maqaayad ay fadhiyeen dad shacab ah oo halkaa ku caweynayay, sida aan shaacinay xalay.
Qasaaraha ka dhashay weerarkaas ayaa lagu sheegay dhaawaca Shan ruux oo kamid ahaa dadkii fadhiyay maqaayadda, lamana oga weerarka cidda fulisay, iyadoo daqiiqado kaddib ay goobta soo gaareen ciidamada ammaanka ee Jubbaland.
Ma jiro wax wara oo kasoo baxay maamulka magaalada Kismaayo inkastoo ciidamda ammaanku ay dad u xirxireen weerarka, dhanka kale ma jirto cid sheegatay weerarka, balse waxaa loo maleenayaa in Kooxda Al-Shabaab ay geysatay falkan maadaama ay iyadu tahay kooxda kaliya ee dagaalka kula jirta maamulka Jubbaland.
Magaalada Kismaayo waxaa baryihii u dambeeyay kusoo badanayay dilal qorsheysan weerarada Bumba tuurka ah kuwaasoo lagu beegsanayo dadka shacabka ah iyo mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland.
Dhamaadkii Sanadkii lasoo dhaafay, waxaa lagu dilay qarax ismiidaamina ahaa Maalin Jimco ah salaadii qudbada kadib Shaafi Raabi Kaahin waa madaxa Rugta ganacsiga Jubbaland, oo Axmed Madoobe qaraabo dhaw ahaayeen.
Kismaayo amnigeeda ayaa mudooyinkii dambe faraha kasii baxaya, waxayna Al-Shabaab u dirtay koox dilalka iyo qaraxyada ka fulisa magaaladda.